Ngaphambi ukhula lwenkohlakalo egcwele, ungase uthande ukubuza nokuphendula imibuzo:
Ingabe zikhona izingozi baqede idivayisi?
1. Yenza isipele konke kudivayisi yakho.
Yilokho okubalulekile kuwe ngaphambi kokuba uqale. Kufanele njalo wenze isipele idatha yakho yamanje bese ROM ngaphambi flash entsha.
2. Qinisekisa ukuthi idivayisi yakho lishajwe, noma okungenani 50% ileveli yebhethri.
3. Vumela kwe-USB kungasebenzi kudivayisi yakho. Ezihlobene: Kanjani amandla kwe-USB kungasebenzi
4. Vula bootloader yakho. Ezihlobene: Indlela ukuvula bootloader yakho
5. Uxhumano lwe-inthanethi ezidingekayo
6. USB encane
Indlela impande Android ne Kingo Android Root
nesitatimende: Ukhula lwenkohlakalo egcwele IFONI WAKHO NGEKE CISHE isiqinisekiso singasebenzi esusela CARRIER KANYE MANUFACTURER. UMA UNGENALO SENGATHI UKWAMUKELA iphutha NGANOMA YIKUPHI imiphumela emibi ukhula lwenkohlakalo egcwele, KUDALA HHAYI DO FUNDA YILUPHI OKWENGEZIWE. LAPHA BE Dragons.
Step 1: Thwebula Kingo Android Root
Nakhu Kingo sika uhlu lamadivayisi ahambelanayo. Sicela uhlole lapho phambi uyilanda. Uma ifoni yakho hhayi ohlwini, ningakhathazeki, zama ukuthola uchungechunge efanayo amafoni. Noma uzoba ukuya Xda Onjiniyela Forum (futhi elalidume kunawo wonke Androd iforamu) usizo. Bheka intambo kudivayisi yakho ethile bese uqinisekile ukuthola indlela baqede idivayisi yakho.
Step 2: Qalisa Kingo Android Root
Ngemuva efakwe lolu hlelo, qhafaza kabili uphawu ezenzelwe ideskithophu Kingo Android Root futhi uqalise ke.
Step 3: Xhuma idivayisi yakho ye-Android kwikhompyutha yakho nge-USB cable.
Uma ungazange ufake umshayeli idivayisi yakho kukhompyutha yakho ngaphambi, Kingo izolanda ke kusukela inthanethi bese uyifake ngokuzenzakalelayo.
OKUBALULEKILE: Nakani isikrini kudivayisi yakho ukuze amafasitela ngokushesha. Tshwaya “Hlala uvumela njalo kusuka kule khompyutha”.
Step 4: Chofoza “Impande” baqede idivayisi yakho.
Uhlelo izozama baqede idivayisi yakho. Ngo inqubo, idivayisi yakho ingase iqalise izikhathi eziningana.
Step 5: Umsuka Phumelele, Chofoza “Qeda” ukuqalisa phansi idivayisi yakho.
Step 6: Hlola isimo impande kudivayisi yakho.
Uma uthole uhlelo lokusebenza okuthiwa SuperSU efakwe kudivayisi yakho, ke siyakuhalalisela, uthola idivayisi yakho yimpumelelo bagxile.
Posted on July 18, 2015 Agasti 26, 2015 Umbhali WillIzigaba Umsuka Amadivayisi AndroidAmathegi impande android, impande idivayisi android, impande Ucingo Android, impande ithebhulethi Android
Langaphambilini post Previous: Ingabe Likhona Izingozi baqede An Kudivayisi Android
Next post Next: Indlela Yenza Up Phones yakho ye-Android